Qeerroon Oromoo G-Q-W Magaalaan Sadaan Canqaa gocha sukkanneessaa dubartii ulfa irratti humni waraana wayyaaneetiin – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQeerroon Oromoo G-Q-W Magaalaan Sadaan Canqaa gocha sukkanneessaa dubartii ulfa irratti humni waraana wayyaaneetiin
Qeerroon Oromoo G/Q W/ Magaalaan Sadaan Canqaa gocha sukkanneessaa dubartii ulfa irratti humni waraana wayyaaneetiin raawatame balaaleffachuun hiriira mormii bahan
Silas, OPDOn akka tasaa dogoggoraan uumamte; akka tasaa dogoggoraan jiraatte; akka tasaa dogoggoraan hojjatti; akka tasaa dogoggoraan haqa gabaasti. Kunoo ragaan hojii ishii ti!!
Dhimma marii nagaa irratti OPDO keessa yaada lama jira. Gareen tokko ABOn yoo biyyatti gale, nagaan akka bu’u amana. gareen lammeessoo immoo ABOn yoo biyya seene OPDOn hundeen baduu waan dandeessuuf mariin kun akka gufatu barbaadu. Ilaalchi lammataa kun caasaa OPDO gadjallaa jiran keessatti heddumminaan mul’ata. Kun keessoo OPDO waan jeeqaa jiruu dha.
Haata’uutii, OPDOn marti kan hubachuu qabdu, fedhii ummataan ala waanti godhamu akka hin jirree dha. Aangoon kan ummata bal’aa ti!! Fedhii ummataaf buluun barbaachisaa dha!
Hidhamtooti Oromoo dhiheenya mana hidhaatii bahan Artist Nuhoo Goobanaa Adaamaa deemanii dubbisan. Artist Nuhoon dhukkubsatee yaalamaa jiraachuun beekamaa dha.
Hidhamtooti Oromoo duris seenaa gaarii qabu; saba isaaniif waan falmaniif hidhaman. Kunoo ammas horii qabaachuu baatan illee, kaayyoo fi jaalala saba isaanii waan qabaniif, wallisaa fi qabsaa’aa Oromoo, Nuhoo Goobanaa, bira deemanii akka haamilee horatu, akka abdii argatuu fi akka dafee fayyuuf bira dhaabbatan.
Galata guddaa qabu.
BAANKII HOJI GAMTAA OROMIYAA
Hiidhamtootanii duraanii kuutaalee OROMIYAA adda addaaraan OBBOO OLBAANAA LELLISAA tiin walliti dhufnee ARTIISTII KABAJAMAA D/R NUHOO GOOBANAA gaafachuuf ADAAMAA dhufnee .
Oromoon kan billisummaaf hin aare
Harree malee maal ree
Jedhee ijjollumaatii kan xiiqii nuti horee ,
Tookkumma jedhe kan tokkoo nu godhee akkasiiti arguu kootii baay’een gadee innis gaafa KAFYAALLOO TAFARAA arguu baay’ee boo’ee ofii dhukubsatee [half paralyzed] ta’ee har’aa lee oromoof boo’a .
Abbootiin qabeenyaa fi oromoon hundumtuu maaloo goota kana gargaaraa ormii nama mallaanmaltuumaan hidhamee ba’eefi illee konkolaataa kenna ,GOONII AKKA NUHOO GARUU MANA KIIRRAA KESSA JIRAATA BAJAAJIIN MANA YAALAA DEDEBI’AA .
We Visited our hero FAMOUS ARTIST D/R NUHO GOBENA ,who lives in ADAMA town it’s very painful to see him sick and half paralyzed.